Ahoana ny fomba hanokafana sy hametrahana rakitra APK amin'ny PC | Androidsis
Manuel Ramirez | | apk, Fampiharana Android, Android cheat
Soa ihany fa azontsika atao izany sokafy ary apetraho ao anaty PC ny fisie APK mba hahafahantsika mankafy ny fampiharana sy lalao ankafizinay. Amin'izany no ahafahantsika mifindra miala amin'ilay efijery kely mankany amin'ny iray lehibe kokoa toa ny an'ny PC-tsika na ilay solosaina finday izay tsy ratsy ihany koa.
Noho izany dia handeha isika ampianaro ny sasany amin'ireo fomba ananantsika hisintona fotoana maro ao amin'ny PC-tsika ary ankafizo ireo lalao ireo amin'ny efijery lehibe kokoa. Oh, ary tsy ho sarotra araka ny tokony ho izy io. Mandeha amin'ny fomba maro isika, koa mitandrema.
2 Ahoana ny fametrahana APK amin'ny Bluestacks
3 Mifandray amin'ny Windows amin'ny telefaona Microsoft sy Samsung anao
4 Misokatra APK miaraka amin'ny Android Studio
5 Mandrosoa rakitra APK amin'ny PC misy Chrome
Izany no safidy tsara indrindra ananantsika amin'izao fotoana izao noho ny fahatsorany sy mora izay ny fametrahana azy. Sehatra iray io ahafahantsika manokatra sy mametraka rakitra APK mba hahafahantsika miditra amin'ireo rindranasa sy lalao video ireo hatrany.
Tena izay ataon'ny Bluestacks mamorona fametrahana Android ao ambadiky ny seho mba hahafahana mamoaka ireo fampiharana sy lalao video ireo. Toy ny hoe nandefa ny Android Studio izahay, ny sehatry ny fampandrosoana ny Google, fa amin'ny fomba tsara sy tsotra nefa tsy mila miditra anaty lahatahiry, sy maro hafa.
Ny tsara indrindra dia izany Fametrahana Android mandeha ao aoriana, Manampy koa ny zava-misy fa manana ny Play Store napetraka izy mba hahafahantsika misintona azy ary afaka miditra amin'ireo rindranasa sy lalao rehetra novidintsika. Mazava ho azy, afaka mametraka APK avy amin'ity emulator ity izahay satria hasehonay anao eto ambany.
Raha ny marina, hanana kiheba roa eo an-tampony isika izay hitondra antsika any amin'ny foibe fampiharana sy lalao, ary ny faharoa ho an'ny lalao apetrakay amin'ny PC. Izany hoe tsy maintsy miditra amin'ny Bluestacks hatrany izahay handefasana azy ireo ary hahafahantsika milalao Mario Kart Tour.
Ary ity angamba Ny tombony lehibe indrindra amin'ny Bluestacks, satria hanakana antsika tsy hanakorontana amin'ny APK izany, mba hahafahantsika mikaroka an'io APK navoaka io ary tsy mila mandalo fomba hafa sarotra kokoa amin'ny fanaovana azy, toy ny Android Studio.
Izany dia nilaza fa tokony holazaina fa ny fanombohana fampiharana amin'ny PC dia midika izany miatrika rindrambaiko iray izay tsy nohaingoina loatra ho an'ireo efijery ireo izahay refy lehibe kokoa toa ny mpanara-maso na ny fanaraha-maso, toy ny totozy.
Farany, ary na dia Ny Bluestack dia toa manome antsika traikefa mety, ny zava-misy fa nohavaozina ireo fampiharana dia mety hiteraka lesoka amin'ity tontolo simulation Android ity, koa tandremo izany satria mety hitarika anao hidina amin'ny lalan'ny mangidy.
Ianao dia afaka misafidy ny misintona azy maimaim-poana toy ny mandeha amin'ny maodelin'ny famandrihana azy ireo.
Bluestacks - marary mitsika
Ahoana ny fametrahana APK amin'ny Bluestacks
Tianay ny hamela ity faritra ity ho an'ny faritra iray, ary izany dia Ny Bluestacks dia mamela ny fametrahana APK izay nosintominay ihany koa teo aloha avy amin'ny tranonkala toa ny apkmirror (iray amin'ireo atokisana indrindra ary amporisihanay rehefa te hiditra amin'ny APK voafaritra ianao).
Raha lazaina izany dia tsotra ihany:
Nandefa Bluestacks izahay avy amin'ny PC-nay
antsika mankanesa any amin'ny kiheba "Ny fampiharana ahy"
Avy amin'ny zoro eo am-baravarankely Izahay dia mitady ny safidy «Install APK»
Izahay dia mitady ilay rakitra nampiantranoina tamin'ny PC anay ary nametraka azy.
Mifandray amin'ny Windows amin'ny telefaona Microsoft sy Samsung anao
Samsung miaraka amin'ny "Connect to Windows" ary ny fanampiana sarobidin'i Microsoft, nahavita nandefa ireo fampiharana napetrakay tamin'ny finday tamin'ny PC na laptop-nay. Izany hoe, izay apk apetrakay tanana amin'ny finday Samsung dia azo atomboka amin'ny birao PC-tsika.
Efa nanao izany isika naneho hevitra tamin'ny publication isan-karazany ny tombony rehetra amin'ny Connecting to Windows ary ny app Your Phone avy amin'i Microsoft. Ary maro ny tombony, satria afaka mandray antso an-tariby isika na mandefa rakitra haingana aza rehefa nampifandray ireo fitaovana roa na na dia manana clipboard handika sy hametahana fampiharana aza manomboka amin'ny tranonkala iray mankany amin'ny iray hafa.
Raha ny marina dia manana isika ao amin'ny fantsona horonan-tsarimihetsika Androidsis misy tutorial inona no ampianariny anao ny fomba fanokafana ireo fampiharana azonao amin'ny findainao amin'ny PC-nao. Ary ny tena tsara indrindra, amin'ny fanavaozana farany ny app Windows Phone anao, azonao atao aza ny manokatra rindranasa marobe amin'ny fotoana iray ary manindrona izany aza amin'ny bara fizahana Windows.
Tena miatrika ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra izahay, na dia tsy eo alohan'ny iray aza dia afaka manokatra APK avy amin'ny Windows isikaFa kosa, tsy maintsy mandeha any amin'ny finday isika, misintona ny apk ary mametraka azy mba hanombohana azy avy eo amin'ny app an'ny telefaona Windows anao.
Fa raha mitady tsotra sy mora isika, ary manana finday Samsung izahay ary koa Windows PC, azontsika atao ny mametraka sy manokatra ireo APKs ireo, ary koa ireo rindranasa sy lalao izay napetrakay tamin'ny alàlan'ny fampiononana an'ity Windows sy Samsung ity.
Rehefa nilaza izany, tena hanao mirroring tanteraka isika, na izay mety ho streaming amin'ny telefaona finday, na dia misy endrika manome endrika ny fitantananay amin'ny fampiharana amin'ny PC na laptop-nay aza.
Misokatra APK miaraka amin'ny Android Studio
Handeha amin'ny fomba sarotra indrindra isika rehetra, ary Izany indrindra no ampiasain'ny mpamorona iray te hamorona na manova ny fampiharana noforoninao tamin'ny Android Studio. Ny zavatra mahaliana momba ny Android Studio dia ny manahafana na maka tahaka ny fitaovana virtoaly amin'ny Android misy azy. Izy io dia ny ahafahantsika mamoaka kinova taloha mihitsy aza hahafahantsika mandefa ilay APK fampiharana iray izay notohanana, noho izany dia traikefa feno kokoa ho azy izy io.
ireo no dingana voalohany indrindra:
Hametraka Android Studio izahay: Tranonkala Google
Mametraka Android Studio amin'ny PC izahay
Manomboka fitaovana virtoaly maka tahaka isika
El APK izay nakarinay dia entinay mankany amin'ny fampirimana Tools ao amin'ny lahatahiry Android Studio SDK
Handeha amin'ny fampirimana misy ny APK izahay ary manomboka ity baiko ity izahay amin'ny zon'ny mpitantana amin'ny baikon'ny Windows:
adb mametraka filename.apk
izay filename.apk no ho anaran'ny apk izay tianay ampiana amin'ny lisitry ny fitaovana virtoaly
El Ny kilema lehibe indrindra amin'ity fandidiana ity dia ny tsy fananana teboka manan-danja sasany toa ny Serivisy Google Play, koa raha tsy fampiharana tsotra be izy io, rehefa mikasa ny handefa APK misy rindranasa malaza be izahay, dia ho lany tahaka izany izahay haka tahaka ilay traikefa. Android Studio dia natao tokoa ho an'ireo izay te-hizaha ny fampiharana alohan'ny hamoahana ny kinova farany amin'ny Play Store, saingy amin'ny alàlan'ny fitsapana ny APK dia mazava ho azy fa afaka isika.
Mandrosoa rakitra APK amin'ny PC misy Chrome
Ary izao ianao dia hanontany tena raha misy ny fomba tsy hisarihana emulator toa ireo voalaza ireo mba hanombohana rakitra APK. Eny misy ary amin'ny alàlan'ny browser Chrome miaraka amina extension izay ahafahantsika manao an'io hetsika io.
Fitaovana ity dia noforonin'ireo mpamorona lozisialy ho an'ny rafitra fiasa Android. Ka mamela antsika amin'ny alàlan'ny Chrome hanahaka ny APK na dia amin'ny rafitra miasa hafa toa ny MacOS aza raha toa ka manana ny mpiorina napetraka ihany.
Para afaka mandefa rakitra APK ao amin'ny Chrome mila manamarina ireto dingana manaraka ireto izahay:
Ampidiro ny browser Chrome ary mandehana any amin'ny ARC Welder: Fanitarana fampidinana
Izahay dia manampy ny ARC Welder amin'ny Chrome
Ampidino ny APK amin'ny PC na laptop-nay
Misafidy ny takelaka na finday ilainay handefasana ny fampiharana izahay
Tsindrio ny bokotra fanandramana hijerena raha mandeha tsara ny fampiharana
Tsindrio ny «fampiharana fandefasana»
Afaka isika izao atombohy ny APK amin'ny PC anay ary ankafizo na andrana izany fampiharana izany amin'ny solosaintsika. Ankehitriny dia tsy maintsy misafidy izay fomba naseho mety hahaliana anao indrindra izahay. Manoro hevitra ampahibemaso ny Bluestacks izahay satria mila misintona, mametraka ary miditra ao amin'ny kaonty Google fotsiny izahay vao miroso amin'ny fametrahana APK avy amin'ny Play Store mitambatra na APK amin'ny alàlan'io fomba io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fomba hanokafana sy hametrahana rakitra APK amin'ny PC
Ahoana ny fametrahana ny taratasy fanamarinana nomerika amin'ny telefaona Android